वीपी प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. खनाललाई पूर्ण अधिकार सहितको कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी | Makalukhabar.com
वीपी प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. खनाललाई पूर्ण अधिकार सहितको कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी
असोज १६, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. गुरु खनालले कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका छन् । केही महिना अघि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ लाख घुस रकम सहित रंगेहात पक्राउ गरेपछि प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष रहेका डा. खनालले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी संहालिरहेका थिए ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा डा. खनाललाई प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन् । डा. खनाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइसकेको पत्र प्रतिष्ठानमा आइसकेको छ । डा. खनाललाई उपकुलपतिको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपति हुँदा डा. खनाललाई प्रतिष्ठानको तलब, विजुली, पानी, टेलिफोन र दैनिक कार्यसञ्चालनको मात्र खर्च गर्न सक्ने अधिकार थियो । अब पूर्ण अधिकार सहित कार्यवाहक दिएपछि डा. खनाललाई प्रतिष्ठानमा काम गर्ने अवसर मिलेको छ ।
प्रतिष्ठानको दयनीय अवस्थामा उपकुलपति भएका डा. खनालका सामु प्रतिष्ठानको गरिमालाई पुर्नजिवित गर्ने ठूलो चुनौति छ । प्रतिष्ठानमा देखिएका विक्रिति विसंगती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र चुस्तदुरुस्त बनाउन तथा प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन विकास निर्माणलाई सुचारु गर्न डा. खनाललाई बाटो खुलेको छ ।
पूर्ण अधिकार सहितको कार्यवाहक उपकुलपति नियुक्तिको पत्र आएपछि डा. खनालले आफुलाई अब काम गर्ने बाटो खुल्ला भएको बताए । मकालु खबरसँग कुरा गर्दै डा. खनालले भने–‘प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउन समस्या थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पूर्णअधिकार सहितको उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको पत्र आएको छ । अब मलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ डा. खनालले भने–‘प्रतिष्ठानको अधिकतम हितका लागि काम गर्नेछु ।’
चैत २२, काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै घट्न सकेको छैन । संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ५९ हजार नाघेको छ ।गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज बिहानसम्म ५९ हजार १ सय ४१ को मृत्यु भइसकेको... जारी राख्नुहोस...
चैत्र २१, विराटनगर । विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको भीड बढेको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभर गरिएको लकडाउनले केही साता यता अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप ह्वात्तै घटेको थियो । तर, अहिले पुनः बिरामीको चाप बढ्न थालेको हो ।नोबेलको आकस्मिक कक्षमा अहिले दैनिक एक सय भन्दा बढी बिरामी उपचा... जारी राख्नुहोस...
चैत्र २१, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को आशंकामा शुक्रबारसम्म १ हजार २७७ को परिक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आज (शुक्रबार) आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।उनका अनुसार देशभर १२० जना कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसनम... जारी राख्नुहोस...